महापाप लाग्न सक्छ यी ७ कुरालाई शंका गरे , के के हुन ? जानकारी लिनुहोस - नमस्ते खबर
महापाप लाग्न सक्छ यी ७ कुरालाई शंका गरे , के के हुन ? जानकारी लिनुहोस
भनिन्छ मान्छे जस्तो सोंचाइ राख्छ उस्तै हुन्छ । त्यसैकारण सोंचाइ जहिले पनि सकारात्मक राख्नु पर्छ । ग्रन्थहरुमा यस्ता ७ ब्यक्ति तथा चिजहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको जसलाई कहिल्यै पनि शंका गर्नु उचित मानिँदैन । नीति श्लोक भन्छः देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। याद्रशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताद्रशी १ तीर्थः तीर्थमा भगवानको बास हुन्छ
नीति श्लोक भन्छः देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। याद्रशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताद्रशी१ तीर्थः तीर्थमा भगवानको बास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तीर्थमा भक्तहरुको भिड समेत हुन्छ ।यदि तपाइँलाई विश्वास लाग्दैन भने मन्दिर लगायतका तीर्थस्थल नजानुस् तर गैसकेपछि त्यहाँ शंका नगर्नुस् । तीर्थमा गएर अविश्वास गर्नाले तपाइँको पुण्य नाश हुने शास्त्रमा उल्लेख छ
आजदेखि ट्यांकर व्यवसायी र मजदुर आन्दोलित भएपछी , पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी बन्द